ओली बाको सातो गएछ क्या ? – Yug Aahwan Daily
ओली बाको सातो गएछ क्या ?
युग संवाददाता । २५ मंसिर २०७७, बिहीबार ०९:४७ मा प्रकाशित
हैन ! राजा नामाँ दुईचार ठाँ जनता सडकाँ आ देखेछी ओलीबाकोसातो गएछ क्या ? कमिनिष्टबाहेक अरुदल कैल्यै नचाहिने जस्तो गरिराँ बेलाँ एक्कासी सर्वदलीय बैठक भनेर सारा दललाई बोलाएर बालुवाटाराँ कालो च्या ख्वाएर पठाएछन् त । हुन पनि मनको दुखेसो कोसँग बिसाउने तनि ! आफ्नै पार्टीका नेता भनाउँदासित दुख विसाम् भने गोडा तिनेक महिनादेखि सत्ताच्युत गराउन ढोके र कोठे बैठकाँ व्यस्त छन् । अनि संघियता र गणतन्त्र जोगाउन भनेर जनताले सकि नसकी दुई तिहाइ मत देका छन् । त्यतिमात्रै हो र ? संघीयता नामाँ गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने र देशाँ समृद्धि ल्याउने भनेर ओलीबाका उल्टनपल्टन सत्ताको भान्साँ बसेर डाडु पन्यू चलाएर पालै शान्ति पेट भर्नतिर लाईरा बेलाँ त्यसै त झले र माकुने अनि बामे र प्रचण्डले रातको निद र दिनको चैन लुटेर बस्न खान देका छैन ।
अनि घरभित्रा शत्रुले नपुगेर बाहिर सडकाँ राजा नामाँ ओलीको सरकारमाथि धावा बोलेछी ओलीबा नी के गरून् के ? ख्यालख्यालाँ गणतन्त्र छिनेर राजतन्त्र ल्याइदे र आँफु गद्दि छोडेर टाप कस्ने स्थिति आयो भने त गणतन्त्र मासेर राजतन्त्र ल्या आरोप त ओलीमाथि त आउने भो नी हैन र ? त्यै भएर नी ओलीबा दलवालाहरसित ग्वार माग्न पुग्या होलान् सायद ! अन्यथा सानातिना कुराँ ओलीबा अरुसित झुक्नेवाला मान्छे हैनन् । झुक्ने भए त आफ्ना पार्टीका नेतारुसित झुकिहाल्थे । दलवालाहरुलाई भए त बाटाघाटा सडक पुलपुलेशा जाँ भएनी आफ्ना मुसडण्डेहरु पठाएर लछारपछार गरेनी हुन्थ्यो । तर राष्टिय झण्डा हाताँलेर मरी सक्या राजतन्त्रलाई ब्युँताउने खेल खेलेछि बिचरा ओलीबालाई खरो त छुटन्यै भो नि । त्यै भएर होला बिचरा ओलीबाले सर्वदलिय बैठक नि तात्ततातै बोलाए के ! बरु बैठकाँ ओलीबालाई सान्त्वना र ढाड्स दलवालाले दे कि नाई कुन्नि ?
अरुको कुरो त सुन्न पाइएन । काँग्रेसीहरले चाइँ प्रजातन्त्राँ नाराजुलुस गर्न पाइन्छ भनेर झन् ओलीबालाई उल्टै हप्काजस्तो सुन्नियो । राप्रपाले त झन् हिन्दुराष्ट र राजासहितको प्रजातन्त्र चाइन्छ, आन्दोलन जारी हुन्छ भन्देछि बिचरा ! ओलीबा, दुख्खाँ साथीभाईले साथ देलान् भनेर बालुवाटाराँ बोलाएर कालो च्या ख्वाए । तर उल्टै जुलुस निकाल्न पाइने कुरा गर्देछि साथीभाईलाई बोलाको नी केई सार भएन । ओलीबा चिन्ता नगर्नाेस्, काँग्रेस ले प्रजातन्त्राविरुद्ध राजतन्त्र ल्याउन दिन्न । किनभने यो देशाँ आन्दोलन गर्ने र प्रजातन्त्र ल्याउने र त्यसको संरक्षण गराउने अनि संविधानको पालना गराउने भनेकै काँग्रेस हो । त्यसैले यो देशका जनताले काँग्रेसलाई सत्ताँ पुग्न नदेनी काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने आन्दोलनाँ जनताले साथ दिन्छन् दिन्छन् । त्यसैले सडकाँ राजा बोलाएर गद्दियाँ राजा आउन्नन् चिन्ता नगर्नाेस् । बरु जनताको गास, बास, कपास, रोजगार शिक्षा र स्वास्थ्यमा चिन्ता गर्नाेस् ।
जनता कोरोनाको महाँमारीया के खाम् के लाम भा छन् । ओखतीमुलो कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ताँ छन् । तर तपाइँको सरकार जनतालाई निशुल्क उपचार नगर्ने भनेर उर्दि हान्नुहुन्छ । जनता कोरोनाले मरे मरिन्छ अस्पताल गइन्न भनेर घरैमा थन्क्याछन् । देशभर दिनको जम्मा १० हजार मान्छ्या पिसिआर गरेर तपाइँको सरकारले गज्जब गर्याछम भनेर घोक्रो फुलाएर बस्य ाछ । त्यसैले आजसम्म त जनता साक्षि राखेर काम गर्नु भएन भएन । कमसेकम अब त जनता निम्ति भनेर देख्खिने गरी काम गर्नाेस् । राम्रो काम गर्नु भो भने तिनै जनता राजा ल्याउँछम् भन्ने जुलुसाट फर्केर “जनताको शासन चाहिन्छ, ओलीबालाई ल्याईन्छ“ भनेर चुनाबाँ तपाइँको नामाँ धुलो उडाउँछन् । तर तपाईं र तपाइँको सरकार जनता निम्ति कामै गर्दैन । अनि जनता के गरून् त नी । दलवालासित वाक्कदिक्क भए र दलवालाका हजारौँ राजा पाल्नुभन्दा एउटै राजा पालम भनेर लाग्या होलान् । जनता सडकाँ आउन नदिने काम त सरकारको हो । ओलीबा खै कुरो बुझ्या ?